Pôrtô Rikô: Famonoana olona vokatry ny fankahalana natao tamin’ny tanora pelaka iray niteraka fahatafintohinana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2018 3:49 GMT
Nanonofy ny hiasa amin'ny indostrian'ny lamaody i Jorge Steven Mercado, 19 taona. Mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny fikambanana manandrateny ho fisorohana ny VIH sy hiaro ny zon'ny pelaka ihany koa izy. Saingy tamin'ny herinandro lasa teo, hita niparitaka, norasarasaina ny vatany ary nodorana ny ampahan'ny vatany, tao amin'ny faritra ambanivohitr'i Guavate, Cayey, Pôrtô Rikô. Namaritra ity famonoana feno habibiana ity ho heloka bevava fankahalana avy hatrany ireo mpikatroka avy amin'ny vondrom-piarahamonina LGBT ao Puerto Rico. Tsy mbola nisy na dia heloka iray notsaraina teo ambanin'ny lalàna Pôrtô Rikana momba ny heloka bevava fankahalana hatramin'ny nankatoavana azy tamin'ny taona 2002. Ambony kokoa ny sazy raha ampiharina ny Lalàna momba ny heloka bevava fankahalana.
Andro vitsy taorian'ny vono olona, niaiky ny helony i Juan Martínez Matos, 26 taona. Araka ny tatitry ny vaovao ao an-toerana, nilaza i Martínez Matos fa nandeha nitady mpivaro-tena teny an-dalamben'i Caguas, Pôrtô Rikô izy, raha nanatona azy i Steven. Nilaza i Martínez Matos fa “tsy nahafantatra izy fa lehilahy i Steven Mercado mandra-pahatongan'izy ireo tao amin'ny efitranony ao an-tanàna iray hafa (voalaza fa niakanjo toy ny vehivavy ilay niharam-boina). Nilaza ampahibemaso ireo mpikatroka pelaka Ada Conde sy Pedro Julio Serrano fa falehan'ireo lehilahy mpanova taovam-pananahana sy sarimbavy ny toerana nangalàna an'i Steven Mercado. Nilaza i Martínez Matos fa namono an'i Steven ho “fiarovan-tena” izy taorian'ny fifamalian'izy ireo. Norasarasainy avy eo ny vatany, ary navelany tamin'ny faritra lavitry ny tranony. Nilaza ihany koa i Martínez Matos fa halany ny pelaka satria voaolana izy fony mbola tany am-ponja noho ny fanaovana herisetra an-tokantrano. Nisafoaka ireo mpikatroka pelaka raha nilaza ny polisy manampahefana misahana ny fanadihadiana fa: “Ny olona tahaka izany, izay manao karazana zavatra tahaka ireny, ary mivoaka imasom-bahoaka, dia mahalala tsara fa mety hitranga aminy izany.” Nangataka ny fanesorana avy hatrany an'ilay manampahefana tsy hisahana ny raharaha izy ireo. Voampanga noho ny vono olona i Martínez Matos ary mandoa onitra 4 tapitrisa dolara Amerikana hanafahany ny tenany.
Hatramin'ny naha-faritr'i Etazonia an'i Pôrtô Rikô, dia mihatra ny lalàna federaly. Mpikambana ao amin'ny Kongresy Pôrto Rikàna Etazonia avy any New York no nangataka mba hanenjehana ity heloka ity eo ambanin'ny lalàna federaly vaovao mifehy ny heloka bevava fankahalàna. Ny Birao Mpanadihady Federaly (FBI) no manaramaso ny famotorana. Tamin'ny taona 1980, namono pelaka 27 tao amin'ny nosy ilay zatra mamono olona, ​​Ángel Colón Maldonado, fantatra amin'ny anarana hoe “Anjelin'ny Bachelors”. Vao haingana ireo mpikatroka pelaka no nampitandrina ihany koa momba ny vono olona hafa nihatra tamin'ny lehilahy pelaka tao San Juan, renivohitry ny firenena.
Naneho hevitra momba ity heloka bevava mahatsiravina ity ireo bilaogera. Nanameloka ny fahanginan'ireo mpitarika ara-pivavahana sy mpanao politika ireo mpikatroka ny zon'olombelona sady mpitondratenin'ny fikambanana LGBT Puerto Rico para Tod@s (Pôrtô Rikô ho an'ny rehetra), Pedro Julio Serrano [ES]:
Tao Saadaya [ES], Hiram, bilaogera Pôrtô Rikàna avy any Chicago, nitaraina momba ny tantara lavabe mikasika ny fankahalana pelaka ao Pôrtô Rikô:
Amin'ny Alahady, hisy ny fijoroana ao New York City ho fahatsiarovana an'i Jorge Steven Mercado.